တရားမျှတမှုအတွက် တေးဂီတတွေနဲ့အတူငါတို့ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီ - European External Action Service
EEAS > Myanmar (Burma) > တရားမျှတမှုအတွက် တေးဂီတတွေနဲ့အတူငါတို့ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီ
28/01/2019 - 13:18
ဝေလ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊ ရော့ခ်ဘုရင်ကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်တို့နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးတေးဂီတအနုပညာရှင်အချို့တို့ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ We Rock for Justice ဂီတပွဲကြီးကို လူပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်တို့ကပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဂီတပွဲက တေးဂီတပညာရှင်တွေနဲ့အတူ နာမည်ကြီးသီချင်းတွေကို အတူလိုက်ဆိုပျော်ပါးကြတဲ့ ရိုးရိုးဂီတပွဲသာသာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီပွဲဟာဆိုရင် ပြောကြမယ် (Let's Talk! Campaign) ရဲ့ အရေးပါလှသောပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂကထောက်ပံ့ကူညီတဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောကြမယ်ဆိုတဲ့ campaign က လူမျိုးဘာသာမရွေး ချမ်းသာသူဖြစ်စေ ဆင်းရဲသူဖြစ်စေ အားကြီးသူဖြစ်စေ အားနည်းသူဖြစ်စေ သန်စွမ်းသူဖြစ်စေ မသန်စွမ်းသူဖြစ်စေ လူသားအားလုံးအတွက် တရားမျှတမှုရှိဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာကို လူအချင်းချင်းသတင်းစကားအဖြစ်ဖြန့်ကျက်ပြောကြားကြဖို့ရည်ရွယ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ campaign က တရားမျှတမှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဖွင့်ဟပြောဆိုဖို့ နားထောင်ဖို့ အားပေးကူညီဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို အားလုံးသိရှိဖို့အတွက် အလေးပေးပြောကြားလိုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်သဘောထားဟာ We Rock for Justice ဂီတပွဲကြီးရဲ့အသွေးအသားဖြစ်ပြီး ဖျော်ဖြေသွားကြတဲ့ တေးအနုပညာရှင်တို့ကလည်း တရားမျှတမှု၊ သာတူညီမျှရှိမှုတို့အပေါ် သူတို့ရဲ့ခံယူချက် သဘောထားတို့ကို မျှဝေပေးသွားတဲ့ ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
"Pyaw Kya Mal: Let's Talk!" campaign ambassador Zenn Kyi, EU Ambassador Kristian Schmidt and Yangon Mayor U Maung Maung Soe
ရန်ကုန်တိုင်းမြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးနဲ့ အနုပညာရှင် ဇာဏ်ခီတို့ဟာလည်း စတိတ်စင်ပေါ်မှာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး Kristian Schmidt နဲ့အတူ လာရောက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး Kristian Schmidt က "မတရားမှုကိုတွေ့တဲ့အခါ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လိုအကူအညီပေးကြမလဲ လူသားတစ်ယောက်အတွက်ရပိုင်၊ ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့ ဘယ်လိုရပ်တည်ကြမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ တရားမျှတမှုနဲ့ ခွင့်တူညီမျှရှိမှုအတွက် တောင်းဆိုတာဟာ ချဲ့ကားပြီးတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါဟာလူသားတိုင်းအတွက်အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးဖြစ်လို့၊ အဲ့ဒါကြောင့် ခွင့်တူညီမျှရှိဖို့အတွက် ပြောကြမယ်၊ တရားမျှတမှုအတွက် ကြိုးစားကြမယ်" လို့ အားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။